သဘာဝတရားနှင့်အခြား unexplained ဖြစ်ရပ်၏နက်နဲသောအရာ
Unexplained ဖြစ်စဉ်များ - ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ၏ထူးဆန်းတဲ့နှင့်သဘာဝလွန်နက်နဲသောအရာ
ပြည်သူ့အမြဲကွဲပြားခြားနားသောပဟေဠိ, နက်နဲသောအရာနှင့်ဖြစ်စဉ်များကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပြီ။ အားလုံးအသစ်နှင့်က hidden မှဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကရှင်းပြသည်ထားတဲ့လူ့စိတ်ပညာအားလုံးဒီကိစ္စကို။ ဒါဟာကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် unexplained ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ်မှုများသဘောသဘာဝရှိသည်, သိပ္ပံပညာရှင်များရှိပြီးသားဖြစ်ရပ်များ၏အကြောင်းပြချက်နားလည်ရန်ကြိုးစားနေဖို့မဆုပ်အနစ်ကျူးလွန်ရှိသည်ငြင်းခုန်ရန်ခက်ခဲသည်။
သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိ Unexplained ဖြစ်ရပ်
သမုဒ္ဒရာ၏နက်နဲသောပင်လယ်အမြဲလူတွေကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်နှင့်ကမ္ဘာ့သမုဒ္ဒရာဤမျှလောက်များစွာသောဖြစ်စဉ်များနေဆဲ unexplained ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လူတွေကွဲပြားခြားနားသောဆန်းကြယ်မှုများသရုပ်သူတို့နှင့်အတူပေါင်းသင်း, မပို 10 ထက်% လေ့လာခဲ့သည်။ သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဖြစ်ရပ်ပုံမှန်မှတ်တမ်းတင်ထားသော, ဒါ whirlpools, ကြီးမားတဲ့လှိုင်းတံပိုး, တောက်ပစက်ဝိုင်းရှိပါတယ်နေကြသည်။ ဒါဟာဖော်ပြခြင်းမမဖြစ်နိုင်ဘူး ပုံမှန်မဟုတ်ဇုန် ကလူတစ်ဦးသဲလွန်စ, သင်္ဘောပင်လေယာဉ်မပါဘဲပျောက်ကွယ်သွားဘယ်မှာတြိဂံဟုခေါ်တွင်, ။
အဆိုပါ maelstrom ၏ whirlpool
ပင်လယ်ကွေ့အနီးရှိနျောပင်လယ်ပြင်ထဲမှာနှစ်ကြိမ်နေ့စဉ်နယ်ပယ် maelstrom အတွက်ကျိုးနွံပုံပေါ်ပေမယ့်များစွာသောလူများ၏ဘဝများကိုအခိုင်အမာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်္ဘောသားကြောက်နေကြတယ် vestfjorden ။ အတော်များများက unexplained သဘာဝကဖြစ်ရပ်ဟာ Maelstrom ၏ whirlpool ပတ်သက်. စာပေများတွင်ဖော်ပြထားကြသည် "ဟုအဆိုပါ Maelstrom သို့ဆင်းသက်လာ။ " အလုပ်ရေးသားခဲ့ မြင်ကြနှင့် whirlpool များ၏လှုပ်ရှားမှုကိုပြောင်းလဲနေတဲ့တခါတရာကာလ၌ရှိဟူသောအချက်ကို။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်အန္တရာယ် maelstrom နှင့်ပုံပြင်များကိုအလွန်ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများကြောင့်ဟုဆိုသည်။
မကြာသေးမီကကြောင့်ရေကန်မီချီဂန်အပေါ်မြောက်ဘက်အမေရိကားအပေါ်ဖြစ်သောမစ်ချီဂန်တြိဂံကို ယူ. လူသိများတဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောနေရာများများထဲတွင်။ ဒါဟာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းနှင့်မုန်တိုင်း, ဒါပေမယ့်တချို့တောင်မှသိပ္ပံပညာရှင်များရဲ့ပျောက်ဆုံးမှုကိုရှင်းပြလို့မရဘူးမှန်မှန်ရေ၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါရှင်းပါတယ်:
အများဆုံးနားမလည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ရပ်ဆန်းဖော်ပြကြောင့် 1950 ခုနှစ်တွင်လေယာဉ် 2501. ၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပျောက်ဆုံးဖော်ပြရကျိုးနပ်သည်, နယူးယောက်ကနေပျံသန်းခဲ့သည့်ဇွန်လ 23 လေယာဉ်, ရေဒါဖန်သားပြင်ထဲကနေပျောက်ကွယ်သွားသည်။ သင်္ဘော၏အပျက်အစီးများအောက်ခြေပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဖြစ်စေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမမတော်တဆမှုများ၏အကြောင်းရင်းဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ဖြစ်ပြီး, ခရီးသည်မဆိုအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခြင်းရှိမရှိ။
ကရှင်းပြသည်မရနိုင်သည့်နောက်ထပ်ပျောက်ဆုံးမှု, 1938 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဗိုလ်ကြီးဂျော့ခ်ျပေးအပ်ခြင်းငြိမ်ဝပ်စွာနေရန်သူ၏အခန်းသို့ သွား. ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ဘာဖွစျခဲ့, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မသတ်မှတ်နိုင်သောသူအားဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
အခါအားလျော်စွာရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကွဲပြားခြားနားသောသမုဒ္ဒရာများတွင်ကြီးမားသော Rotate နှင့်မီးစက်ဝိုင်း "ဗုဒ္ဓရဲ့ဘီး" ဟုခေါ်ကြသည်ထားတဲ့နှင့်ပေါ်လာ "diabolical အဝိုင်း။ " အစီရင်ခံစာများအရသဘာ၏ပထမဦးဆုံးထိုကဲ့သို့သော unexplained ဖြစ်စဉ်များ 1879 တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များကဖြစ်နိုင်သမျှမဟုတ်ခဲ့, အသွင်အပြင်များ၏အကြောင်းရင်းရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ရှေ့ဆက်အများကြီးယူဆချက်ထားပေမယ့်ပါပြီ။ စက်ဝိုင်းအောက်ဆုံးမှထမွောကျရာအဏ္ဏဝါသက်ရှိ, ကဖွဲ့စည်းသည့်ယူဆချက်ရှိပါတယ်။ ရေအောက်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပန်းကန်ပြားပျံတစ်ပေါ်ထွန်းခြင်းသောဗားရှင်းရှိပါတယ်။
သိပ္ပံအဆက်မပြတ်သဘောသဘာဝတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်နေသောသော်လည်းနေဆဲ unexplained ဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကဖြစ်ရပ်ဥပမာဒီမှာသင်တို့သည်ဤမျှအပေါ်မိုဃ်းကောင်းကင်၌ကွဲပြားခြားနားသော flash ကိုကျောက်ခဲထူးဆန်းလှုပျရှားမှု, မြေပြင်ပေါ်တွင် drawings နဲ့ပါဝင်နိုင်ပါသည်, လူတွေ၏စိတ်ထဲတွင်အလွန်အံ့သြစေရန်ဆက်လက်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်သဘာဝတရား၏နက်နဲသောအရာနှင့်အခြား unexplained ဖြစ်ရပ်တော်ကိုနှိုးဆော်နိုင်ဘာယူဆချက်အများကြီးရှေ့ဆက်ထားကြပြီ, ဒါပေမယ့်ဒါဝေးကိုသူတို့သာဗားရှင်းဖြစ်ကြသည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအောက်တိုဘာလအတွက်မဲခေါင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ဒေသ 1 မီတာအရောင်စုံကိရိယာအချင်းပေါ်လာပါသည်။ သူတို့ကလေထုထဲတွင်နှင့်ပျော်ဖို့အချို့သောအချိန်ပြီးနောက်တက်ပျံသန်း။ ဘောလုံး၏နံပါတ် 800 သို့တက်သွားကြပြီးအရောင်ကိုပြောင်းလဲပျံသန်းနေစဉ်အတွင်းနိုငျကွောငျးဟုဆိုကာ, ဒီဖြစ်စဉ်လေ့လာတွေ့ရှိသူတွေကို။ သဘာဝကလူသည်ဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဖြစ်ရပ်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာရှင်းပြ:
ဒေသခံဗုဒ္ဓဘာသာနာဂ (မြွေကိုအလွန်ကြီးမားသော Semiglavaya) ဗုဒ္ဓအားမိမိဆည်းကပ်၏ဂုဏ်အသရေအတွက်ရောင်စုံကိရိယာကိုထုတ်လုပ်ကြောင်းပြောဆိုကြသည်။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီရွှံ့ဖွဲ့စည်းထားသည့်မီသိန်းနှင့်နိုက်ထရိုဂျင်၏ပုံမှန်အတိုင်းထုတ်လွှတ်မှု, သည်အတိုင်း, လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သည့်သဘာဝဖြစ်ရပ်မဟုတ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ ဓာတ်ငွေ့မြစ်၏အောက်ခြေမှာပေါကျကှဲနှင့်ထရာပုံစံပူဖောင်း, မီးထဲသို့လှည့်။ ကသာတစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပျက်အဘယ်ကြောင့်သိပ္ပံပညာရှင်များရှင်းပြလို့မရပါဘူး။
ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများမှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းတောက်ပရောင်ခြည် - နယ်သာလန်တွင်, မိုဃ်းကောင်းကင်၏ချိုင့်၌ Trondheim မြို့အနီးတွင်ယနေ့ unexplained ဖြစ်ရပ်ဆန်းလေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ flash ကိုရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလတောက်ပနှင့်ပိုပြီးမကြာခဏပေါ်လာပါသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်လေဒီအခြိနျမှာဆေးရုံကဆင်းနေသည်ဟူသောအချက်ကိုဤ attribute ။ အမျိုးပျက်သောဖြစ်ရပ်ဆန်းလေ့လာခွငျးအားဖွငျ့တောက်ပတ္ထုများ၏အသွင်သဏ္ဌာန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်ကြောင်းကျိန်းသေကြီးနှင့်၎င်းတို့၏မြန်နှုန်းကွာခြား။
ဒါကြောင့်တခါတရံတွင်ရောင်စဉ်တန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမဆိုရလဒ်များကိုမပေးခဲ့ပါဘူး, မီးကွဲပြားခြားနားပြုမူပေမယ့်ရေဒါနှစ်ဆပဲ့တင်သံမှတျတမျးတငျထားသညျ့အခါမှုမြားစှာရှိခဲ့ပွီ - သိပ္ပံပညာရှင်များသုတေသန၏ကြီးမားသောငွေပမာဏနှင့်အမျိုးပျက်သောအရာကုန်ရပြီ။ သူတို့ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းတာဖန်တီးခဲ့ကြာရာအထူးဘူတာရုံရှိသည်အဘယ်အရာကိုမျိုးကို unexplained ဖြစ်ရပ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သဘောသဘာဝကိုဆုံးဖြတ်ရန်။ တဦးတည်းအယူအဆချိုင့်၌သဘာဝဘက်ထရီကြောင်း, သိပ္ပံနည်းကျဂျာနယ်များအားဖြင့်ရှေ့ဆက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နိဂုံးကြောင်းစုစည်းဓာတုပစ္စည်းများကြီးမားသိုက်များ၏နယ်မြေအပေါ် အခြေခံ. ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
မိမိအထူမြူအနက်ရောင်ဖုံးလှမျးအဖြစ်လန်ဒန်မြို့အခါအားလျော်စွာပုံမှန်အားဖြင့်, မြို့ဝန်းကျင်မရွှေ့နိုင်။ မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောဤအ unexplained ဖြစ်ရပ်သိပ္ပံပညာရှင်များ 1873 နှင့် 1880 တှငျမှတျတမျးတငျထားသခဲ့ကြသည်။ ဒီအခြိနျမှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာလူများသေဆုံးမှုတိုးလာသည်ဟုသူကမှတ်ချက်ချခဲ့သည်။ ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းနှင့်အတူ 40% တိုးများနှင့် 1880 အတွက်အရောနှော၏အခိုးအငွေ့ထဲတွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်စွမ်းဆောင်ရည် 12 တထောင်၏ဘဝအခိုင်အမာအကြောင်း, တွေ့ပါပြီ။ ပြည်သူ့။ နောက်ဆုံးနားမလည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ရပ်ဆန်း 1952 တှငျမှတျတမျးတငျထားသခဲ့သည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်၏အတိအကျကိုအကြောင်းမရှိဖြစ်နိုင်သောမဟုတ်ခဲ့ဆုံးဖြတ်ရန်။
စကြဝဠာကြီးမားပြီးလူတစ်ဦးခုန်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးကြောင့် bounds ။ ဤသည်အများဆုံးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဖြစ်ရပ်အာကာသအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းရှင်းပြမယ်လို့နှင့်လူသားတို့အားများစွာမသိရသေး။ တချို့ကဖြစ်ရပ်ရူပဗေဒနှင့်အခြားသိပ္ပံ၏ဥပဒေများအများအပြားငြင်းဆို။ အသစ်သောနည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သိပ္ပံပညာရှင်များထောက်ခံမှုရှာဖွေတာဒါမှမဟုတ်တချို့ဖြစ်ရပ်ချေပကြသည်။
Sputnik "က Black Knight ဟာ"
ဆယ်စုနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့ဂြိုဟ်တုပြင်ပတူညီမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် "က Black Knight ဟာ" ဟုခေါ်ခဲ့သောကမ္ဘာမြေရဲ့ပတ်လမ်းမှ fixed ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်သူပေါ်လာခဲ့ပါဘူးအချိန်ကြာမြင့်စွာ 1958 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးအပျော်တမ်းနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များနှင့်တရားဝင်ရေဒါမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ အမေရိကန်စစ်ဘက်ကျွမ်းကျင်သူများကဒီစက်ရုံရေဒီယိုလှိုင်းများစုပ်ယူကြောင်းဖိုက်တစ်ဦးအထူအလွှာနှင့်ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုကြောင့်ခဲ့ကြောင်းငြင်းခုန်။ ဤရွေ့ကားလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဖြစ်ရပ်အမြဲတမ်းပန်းကန်ပြားပျံတစ်ပေါ်ထွန်းခြင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပါပြီ။
အချိန်ပြီးနောက်စူပါထိခိုက်မခံတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများဂြိုဟ်တုမှကျေးဇူးတင်စကားရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်, နှင့် 1998 ခုနှစ်, အာကာသလွန်းပျံယာဉ် '' The Black Knight ဟာ '' ဓါတ်ပုံများကိုယူ။ သူနှင့် ပတ်သက်. 13 တထောင်ဘို့ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲမှာ spinning ကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရှိပါသည်။ အတော်များများကသိပ္ပံပညာရှင်များ, သတိထားလေ့လာမှုဆိုဂြိုဟ်တုနှင့်အတုမူရင်းရိုးရှင်းတဲ့ chip ကိုမပေးကြောင်းကောက်ချက်ချပြီးနောက်။ ရလဒ်အဖြစ်ဒဏ္ဍာရီပပြောကျသှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Space ကို signal ကို« wow »
1977 ခုနှစ်မှာဒယ်လာဝဲပြည်နယ်များတွင်ရေဒီယိုတယ်လီစကုပ်၏ printout အပေါ်ဩဂုတ်လ 15 37 စက္ကန့်ကြာမြင့်သောအချက်ပြမှုဖြင့်ရေးဆွဲခဲ့သည်။ အဆိုပါရလဒ်သည်ဤဖြစ်စဉ်အတွက်အကြောင်းပြချက်မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါခဲ့သောစကားလုံး« wow »ဖြစ်ခဲ့သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များလူသိများသည်အဖြစ်ပဲမျိုးစုံ, 1420 MHz ၏ကြိမ်နှုန်းအတွက် Sagittarius များ၏ကြယ်ကနေလာ, ဒီအကွာအဝေးကိုနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်အားဖြင့်တားမြစ်ထားသောကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဖြစ်ရပ်နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာခဲ့ကြပြီ, နှင့်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်အန်တိုနီယိုပဲရစ်ကဤအချက်ပြ၏အရင်းအမြစ်ဟာကြယ်တံခွန်ပတျဝနျးကငျြဟိုက်ဒရိုဂျင်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးဖြစ်ကြောင်း version တစ်ခုပေးအပ်သည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များဟာစိတ်လှုပ်ရှားကြေညာချက်ရာ၌ခန့်ထားပြီ - ထိုနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်၏ဆယ်ဘို့တဘို့ဂြိုဟ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များ Kuiper ခါးပတ်၏အပြင်ဘက်တွင် 10 ဆပိုမိုကြီးမားကမ္ဘာမြေထက်သောကြီးမားသောကောငျးကငျခန္ဓာကိုယ်ကြောင်း။ ဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ခဲ့ကြတယ်သိပ်သုတေသနတွေ့ရှိချက်မှဦးဆောင်ပြီးနောက်အာကာသအတွင်းအတော်များများကထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်
အသစ်ဂြိုဟ် 15 တထောင်ဘို့နေရောင်န်းကျင်တဦးတည်းတော်လှန်ရေးအောင်, တည်ငြိမ်ပတ်လမ်းအပေါ်လှုံ့ဆော်ပေး။ နှစ်။
ယင်း၏ parameters တွေကိုကထိုကဲ့သို့သောယူရေးနပ်စနှင့်အနီယမ်အဖြစ်ဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီကြီးဆင်တူသည်။ ဒါဟာအပေါငျးတို့သသုတေသနနှင့်ဒသမဂြိုလ်၏တည်ရှိမှု၏နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်ကိုများအတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ငါးနှစ်ကြာလိုအပ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
လူရဲ့အသက်တာ၌ Unexplained ဖြစ်ရပ်ဆန်း
ကြားသိခြေလှမ်းများနှင့်အခြား - - အတော်များများကသူတို့ကသူ၏အသက်တာ၌ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရေးနှငျ့ရငျဆိုငျဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူဆိုရပေမည်, ဥပမာ, အခြို့ထူးဆန်းတဲ့အရိပ်, ဒုတိယမြင်ကြပြီကိုအခြားကမ္ဘာမှခရီးသွားလာ။ Unexplained လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့အတိုးသိပ္ပံပညာရှင်များဒါပေမယ့်လည်းဒီကအခြားကမ္ဘာ၏မြို့သားတစ်ဦးပေါ်ထွန်းခြင်းကြောင်းဆိုကြသည်သူကိုအကြားအမြင်သာ။
ဒါဟာသူ့ဘဝနေစဉ်အတွင်းထိုအအဆောက်အဦများနှင့်ဆက်စပ်သူသေလွန်သောသူတို့သည်လူများ, ၏ဟောင်းများကိုအိမ်များတွင်အသက်ဝိညာဉ်ကိုယုံကြည်ကြသည်။ မော်စကိုကရင်မလင်အကြမ်းဖက်များနှင့်သွေးထွက်သံယိုသမိုင်းရှိပါတယ်တဲ့ရဲတိုက်သည်။ အမျိုးမျိုးသောစော်ကားမှု, အဓိကရုဏ်း, မီး, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်အမှတ်အသားကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်နှင့်တာဝါတိုင်များ၏တဦးတည်းနေတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ကြောင်းမမေ့မလြော့ပါ။ အစဉ်အဆက်တို့သည်ကရင်မလင်ခဲ့ကြသူပြည်သူ့သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းမဟုတ်ငြင်းခုန်။
အဆိုပါသန့်ရှင်းရေးတစ်ခုအချည်းနှီးသောရုံးခန်းထဲမှာကြောက်မက်ဖွယ်အသံများနှင့်အခြားဆူညံသံကြားသောအချက်ကိုနေသားတကျဖြစ်လာကြပါပြီ။ သူတို့ကိုယ်သူတို့အရာဝတ္ထုကျသွားဘယ်မှာအခြေအနေများ, စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
နာမည်ကျော်ကရင်မလင် unexplained ဖြစ်ရပ်ဖော်ပြ, ကအိုင်ဗင်ကြောက်မက်ဘွယ်သော၏အကျော်ကြားဆုံးသွန်းဖော်ပြရကျိုးနပ်သည်။ သူကမကြာခဏအိုင်ဗင်မဟာ၏ belfry ၏အောက်ပိုင်းအလွှာအပေါ်လမ်းလျှောက်။ ဒါဟာရှငျဘုရငျ၏တစ္ဆေအချို့သောဘေးအန္တရာယ်အကြောင်းကိုသတိပေးပုံပေါ်သည်ဟုယုံကြည်နေသည်။
ညဥ့်အချိန်၌သင်က Assumption ဘုရားရှိခိုးကျောင်းထဲမှာငိုကလေးစကားကိုနားထောငျနိုငျသညျ။ ဒါဟာကလေးတွေ၏အသက်ဝိညာဉ်, ယဇျပူဇျောယုံကြည်နေသည် အယူမှားတပါးသောဘုရားတို့အား ယခင်ကဒီဒေသမှာတည်ရှိပြီးသောဗိမာနျတျော၌တည်၏။
အဆိုပါချာနိုဘိုင်းနျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောအဖြစ်ဆိုးအကြောင်း, ကမ္ဘာ၏အမျိုးမျိုးသောထောင့်၌လူသိများသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာက related သတင်းအချက်အလက်များသည်, ဝှက်ထားခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သောနောက်ဒီဖြစ်ရပ်ထူးဆန်းတဲ့နှင့် unexplained ဖြစ်စဉ်များအရပျကိုလုယူရှေ့မှာလက္ခဏာများရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သတင်းအချက်အလက်ဘူတာရုံလေးအဖွဲ့ဝင်များကြောင်းလည်းမရှိ, မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့်လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ကြီးမားသောအတောင်နှင့်အတူတစ်ဦးထူးဆန်းတဲ့သတ္တဝါကျော်ပျံသန်းပုံကိုမွငျလြှငျရက်အနည်းငယ်မတိုင်မီကပြောသည်။ ဒါဟာမှောင်မိုက်နှင့်အနီရောင်မျက်လုံးများနှင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဝန်ထမ်းများကြောင့်အစည်းအဝေးအပြီးသူကခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်အတူဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလက်ခံရရှိရန်စတင်နှင့်ညဉ့်အချိန်၌သူတို့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနှင့်ကြောက်စရာအိပ်မက်ဆိုးမြင်ဘူးသောပြောကြပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောအခါ, အဖြစ်ဆိုးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သူကလူဆို, သင်ကကြီးမားအနက်ရောင်ငှက်ရှိခဲ့ပုံကိုမီးခိုးမြင်ကြပါတယ်။ မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောဤအ unexplained ဖြစ်ရပ်အကြီးအကျယ်ဘေးဥပဒ်များနှင့်ရူပါရုံစိတ်ဖိစီးမှုဆင်ခြင်၏။
မသေမှီသို့မဟုတ်စဉ်အတွင်းလူပေါ်ပေါက်သောအာရုံ လက်တွေ့အသေခံ , အနီးသေခြင်းအတွေ့အကြုံများတောင်းဆိုခဲ့သည်။ လူအတော်များများထိုကဲ့သို့သောခံစားချက်များကိုစိတ်ဝိညာဉ်၏မွကွေီးဘဝပြီးနောက်အခြားအအသွင်ပြောင်းဘို့စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်းသိနားလည်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပေးသောယုံကြည်ပါတယ်။ လက်တွေ့သေမင်းနှင့်ဆက်စပ်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်သာမန်လူတွေ, ဒါပေမယ့်သိပ္ပံပညာရှင်များအဘို့မသာစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ကြသည်။ အများဆုံးပုံမှန်အာရုံအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်:
သိပ္ပံပညာရှင်များအဘို့ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ဤရွေ့ကား unexplained ဖြစ်ရပ်များ၏မရှိကြပေ။ ဒါဟာအောက်စီဂျင်၏မရှိခြင်းဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါ hypoxia ဖြစ်ပေါ်, နှလုံးရပ်သည့်အခါယုံကြည်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောတစ်ခါတလေပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်တိကျသောမွငျနိုငျ စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း ။ ဘူးသီးအများအပြားမှာဖြစ်စဉ်းစားသောမျက်စိရှေ့တော်၌, ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်အလင်းမဆိုလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်တောက်ရန်လွန်တုံ့ပြန်ရန်စတင် "ဟုအဆိုပါဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အဆုံးမှာအလင်း။ " Parapsychologists ဘဝကိုသေခြင်းတရားနှင့်ဖြစ်ရပ်ဆန်းနားလည်ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြီးနောက်ရှိကွောငျးကိုဆိုလိုတာ, အနီးသေခြင်းအတွေ့အကြုံများ၏တူသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
နဂါးသောကျောက် - မှော်ဂုဏ်သတ္တိများ
Abaddon - ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံ၏အပြင်းထန်ဆုံးသတ်တဝါတစျဦး
အဆိုပါ loggia ဖို့ပြတင်းပေါက်
သလဲသီးချွတ်ချွတ် - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း - အမျိုးပေါင်းနှင့် hybrids တွေကို
ဘောင်းဘီ culottes ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
မှတ်ပုံတင်ရန် - ညာဘက်ခြေမအပေါ်ထိ မိ. လဲ
လက်သည်းအဘို့အ Swarovski rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်